Wasiir Axmed Cawad oo ka hadlay kulankii ay la yeesheen Madaxweynaha Somaliland. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Wasiir Axmed Cawad oo ka hadlay kulankii ay la yeesheen Madaxweynaha Somaliland.
Wasiir Axmed Cawad oo ka hadlay kulankii ay la yeesheen Madaxweynaha Somaliland.
August 14, 2019 - By: Mohamud Nadif
Wasiirka Arimaha Dibada Dawlada Federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay kulan dhex maray masuuliyiin ka socda dawlada federaalka ah ee Soomaaliya iyo Madaxweynaha Somaliland , Wasiirku waxa uu sheegay in masuuliyiinta ay isku arkeen xajka ayna deganayaan qasriyo isku dhaw.
“Kulankaas wuxuu ku yimid annaga iyo Wafdiga Madaxweynaha Somaliland waxaa wada deganeyn hal qasri, masaajid ayaa isku aragnay aniga iyo wasiirada kale dowladda federaalka ayaa u tagay oo salaamay, isagana si qurux badan oo soomaalinimada iyo walaalo isu soo hiloobay ayuu noo soo dhoweeyay oo sharaf ku jirto waan isa salaamanay waa is marxabeynay, kaddib waxaa isku arkeynay meelaha muslimiinta tagaan sida Carafo iyo Mina” ayuu yiri Axmed Ciise Cawad.
Wasiirka oo sii wata hadalkiisa waxa uus heegay in kulankaas uusan wax siyaasad ah ku shaqa lahay “ Waxaa arkay dad Soomaaliyeed oo meelo kala duwan ku sugan oo siyaasadeynayay kulankaas, wax gaar ah kama wada hadal, siyaasad shuqul kuma laheyn, madaxweynaha waa xajinayay, anaga waa xajineynay, anaga ma aanan heysan fasax inaan arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya aan ka hadalno, marka ku aragnay Xajka waa u tagnay waana sallaanay”